डिप्रेसन एक अराजकता हो जुन अत्यधिक उदासी, रमाईलो चीजहरूमा चासो हराउने, र कम प्रेरणाद्वारा प्रमाणित हुन्छ।
प्रतिकूल जीवन घटनाहरूको प्रतिक्रियामा दु: ख र निराशाको भावनाहरू अनुभव गर्नु सामान्य कुरा हो। यस्ता घटनाहरूले नोक्सान, प्रमुख जीवन परिवर्तन, तनाव, वा निराशा समावेश गर्न सक्दछ। धेरै जसो केसहरूमा, दु: खी भावनाहरू समाधान हुन्छ जब तपाईं आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको सर्तमा आउनुहुन्छ। शोक सरीक जस्ता परिस्थितिहरूमा यी भावनाहरू महिनौंसम्म रहिरहन्छन् र महत्त्वपूर्ण समयमा फर्कन्छन्, जस्तै जन्मदिन र हराएको प्रियजनसँग सम्बन्धित वार्षिकोत्सव। तपाईसंग समय छ जब तपाई चीजहरु का मजा लिन सक्नुहुन्छ, यद्यपि यो उदासी अवसाद को लक्षण होईन।
डिप्रेसन सामान्य छ। तीन मध्ये एक व्यक्ति आफ्नो जीवनको केहि चरणमा प्रमुख उदासिन घटना अनुभव गर्नेछन्। जबकि डिप्रेसनको प्राय जसो केसहरू हल्का हुन्छन्, दश मध्ये एक जनामा मध्यम वा गम्भिर प्रकरण हुन्छ।
डिप्रेसनको संकेत के हो?
दयनीय महसुस। यो दु: ख दिनको धेरैको लागि उपस्थित छ तर यसको तीव्रतामा भिन्न हुन सक्छ। दुःख हप्ता सम्म रहन्छ।
सामान्य गतिविधिहरूमा रुचि वा खुशीको कमी।
सुस्त वा असक्षम सोच कम एकाग्रताको साथ, समस्याहरू क्रमबद्ध गर्न वा योजना वा निर्णयहरू बनाउन कठिनाइहरूको लागि अग्रसर गर्दछ।
अप्रिय विचारहरु दोहोर्याउँदै, विशेष गरी दोषी हुनु, खराब र अयोग्य व्यक्तिको बारेमा,
तपाईं मरेका वा कुनै तरिकाले आफूलाई हानी पुर्‍याउने भन्दा राम्रो हुनुहुनेछ भन्ने विचारहरू।
अत्यधिक तौलको घाटाको साथ भूखको हानी।
सेक्स मा चासो को हानि
ऊर्जाको हानी, शारीरिक रूपमा सक्रिय छैन भने पनि।
थकित महसुस भए पनि निद्राको कमी। निद्रा सामान्यतया बिहान चाँडो उठ्नेसँग (सामान्य भन्दा एकदेखि दुई घण्टा अघि) असन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुन्छ। केही व्यक्तिहरू, तथापि, वास्तवमा सामान्य भन्दा धेरै सुत्न सक्दछन्।
ढिलो गतिविधि र बोली।
“यी सुविधाहरू मध्ये कुनै पनि डिप्रेसनको चेतावनी संकेतहरूको रूपमा काम गर्न सक्दछ। तपाईंले यी कम्तिमा symptoms लक्षणहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ डिप्रेसन डिसअर्डरको साथ ग्रस्त हुन।”
डिप्रेसनको कारण के हो?
डिप्रेसनको लागि 30% आनुवंशिक प्रभावका कारण हो
कसैलाई थाहा छैन उदासीता के कारण हो। यो स्पष्ट छ कि डिप्रेसनको धेरै केसहरूमा आनुवंशिक कारकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। डिप्रेसन परिवारमा चल्छ जस्तो देखिन्छ (अन्य मुड विकारहरू जस्तै), र डिप्रेसनको सम्भावनाको लगभग 30% आनुवंशिक प्रभावको कारण हो।
तनावपूर्ण जीवन घटनाहरूले डिप्रेसनको शुरुआत वा पुनर्स्थापनमा एक भूमिका खेल्छन्। अरूसँग निरन्तर संघर्षले हाम्रो भलाईलाई पनि असर गर्न सक्छ, जस्तै अन्य सामाजिक र वातावरणीय तनाव, जस्तै वित्तीय कठिनाइ, सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, बच्चा जन्म, एकाकीपन, वा कसैको गुमाउनु वा महत्त्वपूर्ण कुरा। कमजोर व्यक्तिहरूमा, यी अप्रिय जीवन घटनाहरू उदासीन बिरामी हुन वा बिगार्न पर्याप्त हुन सक्छ।
एक व्यक्तिको व्यक्तित्व विशेषताहरू एक महत्त्वपूर्ण कारक हुन्। जब व्यक्तिहरू निराश हुन्छन्, तिनीहरूसँग आफैं र विश्वको धेरै नकारात्मक दृष्टिकोण हुन्छ। उनीहरूले राम्रो चीजको कदर गर्दैनन्, र नराम्रो चीजहरू भारी जस्तो देखिन्छ। केहि मानिसहरूमा चीजहरू यस्तै रूपमा हेर्ने झुकाव हुन्छ जब तिनीहरू निराश हुँदैनन्। अर्को शब्दहरुमा, तिनीहरु लाई एक उदासिन व्यक्तित्व शैली हुन सक्छ।
उदासीनताको अर्को सम्भावित कारण जसलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन शारीरिक शारीरिक रोग वा औषधी हो। ग्ल्यान्डुलर ज्वरो, इन्फ्लूएन्जा, हेपेटाइटिस, थाइरोइड हार्मोन, रक्ताल्पता, मधुमेह, जन्म नियन्त्रण गोलियाँ, मदिरा र दुर्व्यवहारको अन्य पदार्थ, वा हृदय वा रक्तचाप सर्तहरूको लागि जस्तै अन्य औषधि, सबै डिप्रेसन को लक्षण हुन सक्छ।
डिप्रेसनसँग कसरी डिल गर्ने :-
उदासीको सामना गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, र प्रायः तिनीहरू एक अर्काको साथ संयोजनमा उत्तम प्रयोग गर्दछन्। प्राथमिक चिकित्सा विकल्पहरू संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (सीबीटी), एन्टिप्रेसप्रेसन्ट औषधि, र केहि गाह्रो अवस्थामा, इलेक्ट्रोकोभल्सिभ थेरापी (ईसीटी) हुन्। शिक्षा र नक्कल रणनीतिहरू पनि महत्त्वपूर्ण जब तपाईंको उदासिनता व्यवस्थापन गर्न सिक्न।
सीबीटी डिप्रेसनको लागि उत्कृष्ट उपचार हो, एक्लै वा औषधिको संयोजनमा। सीबीटी सिक्ने संलग्न छ:
नकारात्मक विचारहरु लाई नियन्त्रण गर्न को लागी ब्याज को हानि र बेकार को भावनाहरु लाई नेतृत्व गर्न;
दु: ख र निराशा को भावनाहरु का सामना गर्न, र;
कमजोर एकाग्रता र मृत्युको विचारहरु को लागी ब्यवहार प्रतिरोध गर्न
समस्या समाधानका लागि टेकनीकहरू पनि सिकाइन्छ कि समस्या समस्या वा उदासीनताको कारण हो। सीबीटी धेरै प्रभावकारी छ र %०% मानिस हल्का, मध्यम वा गम्भीर डिप्रेशनमा सुधार गर्दछ।
सीबीटी प्राय: सिफारिस गरिन्छ जब:
डिप्रेसन हल्का, मध्यम, वा गम्भीर छ।
यस व्यक्तिको CBT मा पहिलेको सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो।
एक सक्षम, प्रशिक्षित क्लिनीशियन जो सीबीटी मा विशेषज्ञता उपलब्ध छ, वा व्यक्ति ईन्टरनेट सीबीटी प्रयोग गर्न तयार छ।
त्यहाँ औषधी लिनको लागि एक चिकित्सा contraindication छ।
निराश व्यक्ति CBT वा iCBT मन पर्छ।
– Aditya Kumar Bhar
ShareTweetSharePin0 Sharesभगवान गौतम बुद्ध भन्छन् कि तपाई जे सोच्नु हुन्छ त्यही हुन्छ। तपाई के सोच्नु हुन्छ, तपाई के बन्नु हुन्छ। तपाईं आज जुन राज्यमा हुनु हुन्छ, जुनसुकै ज्ञान होस जुन तपाईं सँग छ, सबै काम तपाईंको मानसिकता को कारणले हो। हाम्रो मानसिकता हतियार हो। जसले एक व्यक्ति लाई धनी, र […]